China 8mm Dual Action Polisher 900W Car Electric Buffing Machine X8 mpanamboatra sy mpamatsy | Checheng
Takelaka fanohanana DA
Takelaka miverina Rotary
Pads polishing microfiber
Fitaovana amin'ny antsipiriany momba ny fiara
Borosy amin'ny antsipiriany
Sprayers amin'ny sombin-drano
High Quality 21mm Dual Acti ...
Fivarotana mafana 15mm Dual Actio ...
Item TSY: CHE-X8
Fampiasana: ho an'ny fanosorana fiara
Fe-potoana fandoavana: T / T
Varotra ara-barotra: FOB
Seranana: Shanghai, Ningbo
Ny X8 dia poloney mpanaingo 8mm DA, misy sisiny vita amin'ny fingotra izy mba hifanaraka tsara kokoa amin'ny tanany. Izy io dia manana motera 900W azo itokisana izay manome azy fahaiza-manao tena tsara hanerena tsindry ary hanala haingana kokoa ny kilema. Ny endrika ankapobeny an'ny X8 misy antsika dia mamela ny fizarana lanjany tsara kokoa, ny fikirakirana tsara kokoa ary ny fanitsiana haingana. Ny fanombohana manomboka dia azo ekena, izay hanakana anao tsy hanindry azy tsy tapaka. Ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha ampiasain'ny ankihibe dia manome fifehezana hafainganam-pandeha miovaova avy amin'ny 2500 ka hatramin'ny 6500 OPM, mety hahomby sy mora kokoa amin'ny antsipirian'ny fiara isan'andro izany.
Poloney pad size:
4.0 metatra tariby
1pc 5in lovia tohana, 1pc wrench, 1pc D-tantana, boky 1pc, borosy karbaona 1pr, visy 1pr + mpanasa lamba
1 taona fiantohana voafetra ny lesoka amin'ny fitaovana na ny asa-tanana.
Endri-javatra tsy manam-paharoa
1.Efao amin'ny counterweight miorina amin'ny masinina cnc.
2.Motera mahery vaika 900W manala ny kilema haingana kokoa ary manatsara ny famirapiratry ny loko.
3. malefaka ary mahay mandanjalanja.
4. Orbit lehibe, mahomby be amin'ny famolahana fiara.
5.Setting miaraka amin'ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha 6.
6.Ny fehikibo vita amin'ny fingotra vita amin'ny fingotra ary mahazo aina, mahazo aina kokoa.
7.Ny seranan-tsambo boribory karbaona dia manamora ny fanovan'ny mpampiasa ny borosy karbonina.
F: Nahoana no mifidy antsika?
A: 1. Mpamatsy volamena 2 taona Alibaba izahay.
2. Izahay dia orinasa mpamokatra orinasa mpamokatra poloney manana traikefa 10+ taona amin'ny fampiroboroboana sy famokarana, ny fahaizan'ny famokarana tsara indrindra, ny fifehezana kalitao tsara indrindra, ny serivisy tsara indrindra ary ny vidin'ny fifaninanana.
F: Inona ny fanamarinana ananan'ny vokatrao?
F: Manana fomba fizahana ve ianao alohan'ny fandefasana?
A: Eny, manana fizahana QC 100% izahay alohan'ny fandefasana.
F: Afaka manao serivisy OEM ve ianao?
A: Eny, raisina an-tanan-droa ny baiko OEM.
A: Manolotra fiantohana 1 taona izahay ho an'ireo mpandoto fiara amin'ny lesoka famokarana na olana amin'ny kalitaon'ny faritra. Alefaso azafady sary sy horonan-tsary izahay, hizaha sy hahafantatra azy ireo ny teknisiana anay.
Previous: 900W 21mm Professional Durable Orbital Car Dual Action Polisher DF21
Manaraka: 12mm 900W Orbital Car Wax Buffer Random Auto Polish Machine X12
High Quality 21mm Dual Action Car Orbital Rando ...
Farany Design 900W 12mm Orbit Dual Action Car B ...
Fahombiazana avo lenta 25mm 900W Long Throw Ran ...
6 Inch Variable Speed ​​21mm Random Car Poloney Bu ...